June 2020 - Myanmar Red News
ရှေးဟောင်းကျောက်ထွင်း လက်ရာခြေရာတော် နှင့် ကျောက်ထွင်းရုပ်ပုံများကို ကျွန်းလှမြို့တွင် တွေ့ရှိ
ရှေးဟောင်းကျောက်ထွင်း လက်ရာခြေရာတော် နှင့် ကျောက်ထွင်းရုပ်ပုံများကို ကျွန်းလှမြို့တွင် တွေ့ရှိ စစ်ကိုင်းတိုင်း ကျွန်းလှမြို့နယ် ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာတွင် သီးနှံစိုက်ပျိုးရန်ယာခင်းရှင်းရာမှ ရှေးဟောင်း ကျောက်ထွင်းလက်ရာ ဘုရားခြေရာတော် နှင့် ကျောက်ထွင်းရုပ်ပုံများ၊ ဆင်းတုတော်များ တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်း ဦးဝင်းလှိုင်က ပြောသည်။ ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာမှ ၁ မိုင်ခန့်အကွာရှိ ကျောက်တောင်ပေါ်တွင် စိုက်ခင်းစိုက်ပျိုးရန်အတွက် ကျေးရွာသားတစ်ဦးမှ ခြုံများရှင်းလင်းနေစဉ် ကျောက်တောင်ပေါ်မှ ရှေးဟောင်းလက်ရာ ကျောက်ထွင်း ဘုရားခြေရာတော် ၊ဆင်းတုတော်သုံးဆူနှင့် သဘာဝအလျောက်ရှိနေသည့် ကျောက်တုံးများပေါ်တွင် ခြင်္သေ့ပုံ၊လူပုံနှင့် အစင်းကြောင်းများ ထွင်းထုထားသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါနေရာကို ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့က တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကျေးရွာသားများ၏ ပြောပြချက်အရ သိရသည်။ “ယာခင်းလုပ်ဖို့ ခုတ်ကြထွင်ကြရင်းနဲ့ တွေ့လိုက်တော့ ရွာကဆရာတော်နဲ့ ရေပန်းတွေဘာတွေနဲ့ ထိုးချလိုက်တော့ တွေ့ရတာ။ […]
တစ်ယောက်တည်း ချစ်နေရုံနဲ့ အချစ်ဆိုတာ မပြီးပြည့်စုံနိုင်တဲ့ အရာတစ်ခု
တစ်ယောက်တည်း ချစ်နေရုံနဲ့ အချစ်ဆိုတာ မပြီးပြည့်စုံနိုင်တဲ့ အရာတစ်ခု အချစ်ရေး အချစ်မှာ ပိုချစ်တဲ့ သူက ရှုံးနိမ့်ရစမြဲပါပဲ။ နှစ်ဦးသား တည်ဆောက်ထား တဲ့ အချစ်ရေးတစ်ခုမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ဖက်သတ်ချစ်မိတဲ့ အချစ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်။ အချစ်ဆိုတာ တစ်ယောက်တည်း ချစ်နေရုံနဲ့ မပြီးပြည့်စုံနိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ နာကျင် ရတယ် စောစောက ပြောခဲ့ သလို ပိုချစ်မိရင် ပိုနာကျင်ရပါတယ်။ တစ်ဖက်သတ်ချစ်မိတဲ့အခါ ကိုယ့်အချစ်ကို သူမသိတဲ့အတွက် သူ့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေက ကိုယ့်အတွက် ထိခိုက်နာကျင်မှုတွေ ဖြစ်တတ်သလို နှစ်ယောက်သား တည်ဆောက်ထားတဲ့ အချစ်ရေးတစ်ခုမှာလည်း ကိုယ်ကချည်း ချစ်နေရတဲ့အခါ တစ်ဖက်လူက အနိုင်ယူတာတွေ များလာတတ်ပါတယ်။ ဒါက တကယ့်ကို ကိုယ့်အတွက် ဒဏ်ရာဗလပွဖြစ်စေတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ အချစ်က ပေးဆပ်ခြင်း မဟုတ်သလို၊ စွန့်လွှတ်ခြင်းလည်း မဟုတ်ဘူး […]
မင်းသားချောနေမင်းရဲ့ အမာခံပရိသတ်တစ်ဦးရဲ့ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တဲ့ Kညီ
မင်းသားချောနေမင်းရဲ့ အမာခံပရိသတ်တစ်ဦးရဲ့ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တဲ့ Kညီ မြန်မာဗီဒီယိုဇာတ်ကားများနဲ့ ရုပ်ရှင်အတော်များများမှာဇာတ်ပို့အဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်လေ့ရှိတဲ့ Kညီကတော့ ဒီနေ့မှာတော့ မင်းသားချောနေမင်းရဲ့ အမာခံပရိသတ်တစ်ဦးရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ Kညီက သူ့ရဲ့ အကျီင်္ီဆိုင်လေးကိုလာရောက်အားပေးတဲ့ လူတစ်ဦးဆီကနေ အကူအညီတစ်ခုတောင်းခံလာမှုကို စိတ်ပါလက်ပါ ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေက မင်းသားချောနေမင်းအတွက် ဇာတ်ပို့ဟာသ သရုပ်ဆောင် Kညီရဲ့ အထည်ဆိုင်ကနေ ခါးပတ်နဲ့ အင်္ကျီလက်ဆောင်ပေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်……။ မင်းသားချော နေမင်းက ပရိသတ်တွေ ပေးတဲ့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းရတဲ့ အတွက် အတိုင်းမသိဝမ်းသာနေတာဖြစ်ပြီး Kညီကလည်း သူရဲ့ ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာထက်မှာ ” ကျွန်တော့်ဆိုင်ကနေ ခါးပတ်နဲ့အကျီပရိသတ်တစ်ယောက်ဝယ်ယူအားပေးလို့ကျေးဇူးပါ မင်းသားနေမင်း ဆီလက်ဆောင်လေးပို့ပေးဖို့ အကူအညီတောင်းတာနဲ့ နေမင်း ဆီခွင့်တောင်းပြီးသွားပေးဖြစ်တယ်။ လက်ဆောင်လက်ခံပေးတဲ့အတွက် ညီလေးနေမင်း ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော် ဆိုင်နာမည် SNAZZY တော်ဝင်စင်တာ ပထမထပ် ” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာဖြစ်လို့ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Unicode […]
ရွှေလော့ကတ်နဲ့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကို ပရိသတ်တွေအတွက် မဲဖောက်ပေးသွားမယ့် ပွင့်နဒီမောင်
ရွှေလော့ကတ်နဲ့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကို ပရိသတ်တွေအတွက် မဲဖောက်ပေးသွားမယ့် ပွင့်နဒီမောင် ဟိုးအရင်အချိန်ကတည်းက ပရိသတ်အားပေးမှုအခိုင်အမာရရှိခဲ့တဲ့သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ပွင့်နဒီမောင်ကတော့ အခုချိန်မှာဆိုရင်လည်း ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ၊ အခြားအနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ပရိသတ်ရှေ့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူတစ်ယောက်ပါ။ လတ်တလော ကိုဗစ်ကာလမှာတော့ သရုပ်ဆောင်ထူးခြားနဲ့အတူ စပါယ်ရှယ်ဝက်နံရိုးဟင်းလျာတွေကို ရောင်းချပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ပရိသတ်နဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်ရအောင် လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ တနေ့တာအကြောင်းအရာလေးတွေ မျှဝေပေးနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဒီနေ့မှာတော့ ပရိသတ်တွေအတွက်ထူးထူးခြားခြားအစီအစဉ်လေးတစ်ခုပြုလုပ်ထားကြောင်း မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ “စိတ်ကူးပေါက်လို့ မနက်ဖြန်ည7:00 live ပြောရင်း ကံစမ်းမဲဖောက်ကြမယ်လေ.. မေးခွန်းက (၁၀) ခု… လွယ်လွယ်လေးပဲမေးမှာ… စီမီးရဲ့ အကြောင်းပဲမေးမှာနော်…. ခုပေါက် ခုပို့ပေးမယ်… ပြီးတော့ covid ကာလမှာ စီမီးသိထားတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကိုလည်း ပြောကြမယ်လေ… အိုကေနော်” ဆိုပြီး ပရိသတ်တွေအတွက်ပြုလုပ်ထားတဲ့အစီအစဉ်လေးကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်မှာတော့ ရွှေလော့ကတ်၊ ဖုန်းဘေလ်နဲ့ မိန်းကလေးတွေအတွက် အလှကုန်ပစ္စည်းနဲ့ ပိတ်စတို့ကို မဲဖောက်ပေးသွားမှာပါ။ ပွင့်နဒီမောင်ကတော့ […]
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ (၃၀) ရက်နေ့အတွက် မိုးလေဝသ မုန်တိုင်းအခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ (၃၀) ရက်နေ့အတွက် မိုးလေဝသ မုန်တိုင်းအခြေအနေ ခန့်မှန်းချက် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အခြေအနေ။ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် တောင်ပိုင်းတို့တွင် မုတ်သုံလေ အားအသင့်အတင့်မှ အားကောင်းနေပြီး၊ ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် တွင် မုတ်သုံလေ အားနည်း နေပါသည်။ ယနေ့ညနေအထိ ခန့်မှန်းချက်။ နေပြည်တော်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အောက်ပိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ကယားပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကွက်ကျား၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီ အထက်ပိုင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း)နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်း) တွင် နေရာကျဲကျဲနှင့် ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာအနှံ့အပြား မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး၊ တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီးတွင် နေရာကွက်၍ မိုးကြီးနိုင်ပါသည်။ ရွာရန်ရာနှုန်း(၈၀) ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၊ မုတ္တမကွေ့၊ မွန် – […]
မြန်မာပြည်ကို ဆန်စပါး အဓိကတင်ပို့ရောင်းချတဲ့ နိုင်ငံအဖြစ် USDA ကအသိအမှတ်ပြုခံရ
မြန်မာပြည်ကို ဆန်စပါး အဓိကတင်ပို့ရောင်းချတဲ့ နိုင်ငံအဖြစ် USDA ကအသိအမှတ်ပြုခံရ ပထမ ၈လ အတွင်း ဆန်တန်ချိန် ၂ သန်းတင်ပို့နိုင် ခဲ့တဲ့အတွက် မြန်မာ ဟာ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်၊ အိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန် တို့နဲ့အတူ ဆန်အဓိက တင်ပို့သူ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ USDA က အသိအမှတ်ပြု လိုက်တဲ့အတွက် မြန်မာ့ဆန်ဟာ အရင် လို တရုတ်ချည်းအားကိုး မနေကြရတော့ဘဲ နိုင်ငံတကာက ဆန်ဝယ်ယူရေး တင်ဒါတွေကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တနှစ်လျှင် ဆန်တန်ချိန် ၃သိန်းသွင်းရတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်က ဆန်တင်ဒါတခုကို မကြာခင်က ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး၊ မြန်မာ့ဆန်ဟာ နာမည်ကျော် ပြိုင်ဖက် ထိုင်း နဲ့ အိန္ဒိယကို ကျော်ပြီး ဗီယက်နမ်နဲ့ အတူ ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါတွေဟာ […]
သတိမေ့နေတဲ့(၁၅)ရက်အတွင်း ရောက်သွားခဲ့တဲ့ နေရာတွေကို ပြောပြခဲ့တဲ့ ဦးမန်းဝင်း
သတိမေ့နေတဲ့(၁၅)ရက်အတွင်း ရောက်သွားခဲ့တဲ့ နေရာတွေကို ပြောပြခဲ့တဲ့ ဦးမန်းဝင်း လတ်တလောမှာ ဦးနှောက်ခွဲစိတ်ကုသမှုကိုခံယူထားတဲ့ လူရွှင်တော်ကြီးဦးမန်းဝင်းဟာဆိုရင် ခွဲစိတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ (၁၅)ရက်တိတိ သတိမေ့နေခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုဆိုရင်တော့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတိုးတက်ကောင်းမွန်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်နော်။အနုပညာမိတ်ဆွေအချို့ကလည်း ဦးမန်းဝင်းရဲ့အိမ်ကိုသွားရောက်ပြီး သတင်းသွားမေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ ဦးမန်းဝင်းက သူသတိမေ့နေတဲ့ (၁၅)ရက်အတွင်း ဘယ်နေရာတွေသွားခဲ့လဲ ဆိုတာကို အောက်ပါအတိုင်းပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ “အဖေ ဦးမန်းဝင်း သတိမေ့နေတဲ့ ၁၅ ရက်မှာ ဘယ်တွေသွား ဘာတွေလုပ်လဲ သိချင်လို့ ဖြည်းဖြည်းချင်း မေးထားတာပါ။ ” ဖေကြီး ဟိုရက်က ဘယ်တွေရောက်နေတာလဲ ” ” ပြောမယ် ” ” ဖေကြီး ဒီလောက်အကြာကြီး ဘယ်တွေသွားနေတာလဲ ” ” ရွာရောက်နေတာ “( အဖေ့ဇာတိ ကမာကယာကျေးရွာပါ ) ” အဖေ့ကို ဘယ်သူခေါ်သွားတာလဲ ” […]
အမြန်လမ်း ၂၆၁.၁ဖာလုံ မှာ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ လူတွေကို ပြစ်မှတ်ထား စီးပွားရှာနေသူ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကို ပြစ်မှတ် ထားစီးပွားရှာနေသူ ပိုစ့်မတင်ဘူးလို့နေတာ မတော်လောဘနဲ့စီးပွားရှာနေတဲ့လူတွေကြောင့် တင်လိုက်ပါတယ်…….. အမြန် လမ်းမှာ ကားပျက်လို့ ကျွန်တော် ဝပ်ရှော့ရှာတယ် စိုးမိုးကားဝပ်ရှော့ကိုတွေ့တယ် ရောက်တော့ အကိုရေ ကူညီပါအုံး ကားဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူး “ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး ခေါ်ချင်ခေါ်မခေါ်ချင်နေ ခြေကြွခ နှစ်သောင်း ပေးရမယ်ညီ ”တအားမဝေးဘူး ၁မိုင်လောက်ဘဲရှိတယ် ကိုယ်ကတကယ် ဒုက္ခရောက်နေတော့ နှစ်သောင်းမပြောနဲ့နှစ်သိန်းဆိုလဲဝင်မလေးဘူးပေးဖို့ကိုတ ခြား ကားအကူညီနဲ့ ကားလဲသူ့ဝပ်ရှော့ ရောက်တော့ ဆီပန့်လဲရမယ်တဲ့ အဲ့တာပျော်ဘွယ်ကိုသွားဝယ်ရမယ် ကံကောင်းချင်တော့ညီလေးတစ်ယောက်က အလကားကူညီပေးတယ် အဲ့မာစပြီ သူကယ်ရီခ မရတော့ ပစ္စည်း အလွဲပြောဝယ်ခိုင်းတယ် ညနေ၆နာရီကြတော့သူလဲ ပျောက်သွားတယ် ၇နာရီထိုးတော့ ကူညီပေးတဲ့ညီလေးပြန်ရောက်လာတယ် သူဝယ်ခိုင်းတဲ့ပစ္စည်းကအလွဲ သူတပည့်တက်ပေးလဲတက်မရ ည၉နာရီ မှာ သူပြန်ရောက်လာတော့ […]
မှို ကြက်သား နဲ့ကိုကာကိုလာ ချက်ပြုတ်စားသုံးရာမှအဆိပ်သင့်ပြီး တောင်ကြီးမြို့တွင် အမျိုးသမီးနှစ်ဦးသေဆုံး တောင်ကြီးမြို့မှာ မှို၊ ကြက်သား နဲ့ ကိုကာကိုလာ ချက်ပြုတ် စားသုံးရာမှ အစာအဆိပ်သင့်ပြီး အမျိုးသမီးနှစ်ဦးသေဆုံး တောင်ကြီး၊ ဇွန် ၂၉ ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း၊ တောင်ကြီးမြို့၊ သစ်တောရပ်ကွက်ရှိ နေအိမ်တစ်အိမ်မှာ ဇွန်လ နောက်ဆုံးပါတ် အတွင်းက မှိုဟင်း၊ ကြက်သားနဲ့ ကိုကာကိုလာချက် ပြုတ် စားသုံးရာမှ အစာအဆိပ်သင့်ပြီး အမျိုးသမီး နှစ်ဦး သေဆုံး မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သစ်တောရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးထံမှ သိရပါတယ်။ အဆိုပါနေအိမ်ရှိ မိသားစုဝင်တွေက ဇွန်လ၂၂ရက်ခန့်က ရွှေဘုန်းပွင့်တောင်ပေါ်သို့ သွားရောက်ရာမှ မှိုတွေတွေ့ရှိတဲ့အတွက် နေအိမ်သို့ ယူဆောင်လာကာ နေ့လည် စာချက်ပြုတ်စားသုံး ခဲ့ပြီး ညနေစာအဖြစ် ကြက်သားနဲ့ ကိုကာကိုလာ အချိုရည် […]
လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပရဟိတဂေဟာမှာ ရေစုကန်လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ဖြိုးပြည့်စုံ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် အဆိုတော် ဖြိုးပြည့်စုံကတော့ ဒီနေ့မှာ အလှူလေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ ပရိတ်တွေသာဓုခေါ်ဆိုလို့ရအောင် မျှဝေဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ အလှူလေးကတော့ ချင်းပြည်နယ် ကန်ပက်လက်မြို့ ရင်သွေးငယ်များခိုလှုံရာ လူငယ်ဖွံဖြိုကရေး ပရဟိတဂေဟာမှာ ရေစုကန်ဆောက်လုပ်ဖို့ကိုလှူဒါန်းပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖြိုးပြည့်စုံကတော့ ဒီအလှူလေးကို ပြီးခဲ့တဲ့ မွေးနေ့အတွက်ရယ်. အမေဖြစ်သူအတွက်ရယ် ဆရာဖြစ်သူ KAT အတွက်အလှူလေးပြုလုပ်ချင်တာကြောင့် စုထားတဲ့ ငွေ သိန်း(၃၀)ကို လှူဒါန်းပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖြိုးပြည့်စုံက ရင်သွေးငယ်များခိုလှုံရာ လူငယ်ဖွံဖြိုကရေး ပရဟိတဂေဟာမှာရှိတဲ့ ကလေးငယ်တွေ ပိုမိုအဆင်ပြေပြီး ဘဝရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်ပါစေလို့လည်း ဆုမွန်ကောင်းတွေတောင်းပေးထားပါသေးတယ်။ ဖြိုးပြည့်စုံက အခုလိုလှူဒါန်းဖြစ်တဲ့ အလှူငွေတွေဟာ သူ့ကို အစဉ်တစိုက်ပံ့ပိုးအားပေးတဲ့ သူတွေရဲ့အလှူငွေတွေဖြစ်တာကြောင့် (၇)ရက်သားသမီးတွေထပ်တူရစေဖို့အမျှပေးဝေထားပါသေးတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရေ ဖြိုးပြည့်စုံရဲ့ အလှူလေးအတွက် သာဓုခေါ်ဆိုလို့ရအောင်မျှဝေဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Unicode လူငယျဖှံ့ဖွိုးရေး ပရဟိတဂဟောမှာ ရစေုကနျလှူဒါနျးပေးခဲ့တဲ့ ဖွိုးပွညျ့စုံ […]